IZenzo 12 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
12 Malunga nelo xesha uHerode ukumkani wasa izandla zakhe ukuba abaphathe kakubi+ abathile kwabo basebandleni. 2 Wambulala uYakobi umntakwabo Yohane+ ngekrele.+ 3 Njengoko wabona ukuba kwakukholekile kumaYuda,+ waqhubeka wabamba noPetros. (Ngokunjalo, leyo yayiyimihla yamaqebengwana angenagwele.)+ 4 Yaye embambile, wamfaka entolongweni,+ emnikela kumaqela amane atshintshisanayo ngalinye linamajoni amane ukuba amlinde, njengoko wayezimisele ukumvelisa ebantwini emva kwepasika.+ 5 Ngenxa yoko uPetros wayegcinwa entolongweni; kodwa ibandla laqhubeka limthandazela+ kakhulu kuThixo. 6 Ke kaloku xa uHerode wayesele eza kumvelisa, ngobo busuku uPetros wayelele ebotshwe ngemixokelelwane emibini phakathi kwamajoni amabini, yaye abalindi phambi komnyango babegcine intolongo. 7 Kodwa, khangela! ingelosi kaYehova yema+ khona apho, kwaza ukukhanya kwakhanya esiseleni sentolongo. Imbetha ecaleni uPetros, yamvusa,+ isithi: “Vuka ngokukhawuleza!” Yaza imixokelelwane yakhe yawa+ ezandleni zakhe. 8 Ingelosi+ yathi kuye: “Bhinqa uze ubophe iimbadada zakho.” Wenjenjalo. Ekugqibeleni yathi kuye: “Faka isambatho+ sakho sangaphezulu uze undilandele.” 9 Yaye waphuma waza wayilandela, kodwa wayengazi ukuba oko kwakusenzeka ngengelosi kwakuyinene. Enyanisweni, wayeba ubona umbono.+ 10 Bedlula kumlindi wokuqala nowesibini bafika esangweni lentsimbi elikhokelela esixekweni, yaye lazivulekela.+ Kwaye emva kokuba bephumile bahamba isitrato sasinye, yaza ngoko nangoko ingelosi yemka kuye. 11 Yaye uPetros, eqabuka, wathi: “Ngoku okunene ndiyazi ukuba uYehova uthumele ingelosi+ yakhe waza wandihlangula+ esandleni sikaHerode nakuko konke oko ebekulindele amaYuda.” 12 Yaye emva kokukuqwalasela oku, waya endlwini kaMariya unina kaYohane owayenefani enguMarko,+ apho abaliqela babehlanganisene khona bethandaza. 13 Akunkqonkqoza elucangweni lwesango, isicakazana esigama linguRoda seza kusabela, 14 yaye, sakuliqonda ilizwi likaPetros, ngenxa yovuyo asizange silivule isango, kodwa sabalekela ngaphakathi saza saxela ukuba uPetros umi phambi kwesango. 15 Bathi kuso: “Ushiywa ziingqondo.” Kodwa sema ngelithi kunjalo. Bathi: “Yingelosi yakhe.”+ 16 Kodwa uPetros waqhubeka enkqonkqoza. Bakuvula, bambona baza bakhwankqiswa. 17 Kodwa wawangawangisa+ ngesandla sakhe ukuba bathi cwaka waza wabaxelela ngokweenkcukacha indlela uYehova amkhuphe ngayo entolongweni, yaye wathi: “Zixeleni ezi zinto kuYakobi+ nakubazalwana.” Ngako oko waphuma waza wahambela kwenye indawo. 18 Ngoko, kwakuba semini,+ kwabakho isiphithiphithi esikhulu phakathi kwamajoni mayela noko ngokwenene kwakwenzekile ngoPetros. 19 UHerode+ wamfuna ngenkuthalo yaye, akungamfumani, wabancina abalindi waza wayalela ukuba baqhutywe baye kohlwaywa;+ yaye wehla kwelakwaYuda waya eKesareya waza wachitha ixesha elithile apho. 20 Ke kaloku yena wayelwile nabantu baseTire nabaseSidon. Ngoko ngamxhelo mnye beza kuye yaye, emva kokweyisela uBlasto, owayephethe igumbi lokulala likakumkani, bazicelela uxolo, ngenxa yokuba ilizwe labo lalibonelelwa ngokutya+ lelo likakumkani. 21 Kodwa ngemini emisiweyo uHerode wazambesa ngesambatho sasebukhosini, wahlala phantsi kwisihlalo sokugweba waza wanikela intetho yesidlangalala. 22 Abantu ababehlanganisene bakhwaza besithi: “Lilizwi lothixo elo, yaye asilamntu!”+ 23 Ngephanyazo ingelosi kaYehova yamxabela,+ ngenxa yokuba engamnikanga uzuko uThixo;+ yaye wadliwa ziimpethu waza wabhubha. 24 Kodwa ilizwi+ likaYehova laqhubeka likhula yaye lisasazeka.+ 25 Bona ke uBharnabhas+ noSawule, emva kokuba beluphumeze ngokupheleleyo ulungiselelo lwamancedo+ eYerusalem, babuya baza bathabatha noYohane,+ lowo wayenefani enguMarko.